Cover Arts | လမ်းအိုလေး
Category Archives: Cover Arts
February 25, 2011 by lanolay	Leaveacomment
(သားပြန်လာပြီအမေ – သုခမိန်လှိုင်။ အောက်တိုဘာ – ၂၀၀၂၊ စာအုပ်ဈေး။)
Categories: Cover Arts, Paintings | Tags: Aung Min, ပင်လယ်စီးခြင်း, ပန်းချီ, သားပြန်လာပြီအမေ, သုခမိန်လှိုင်, အောင်မင်း, lanolay, Painting, TKMH | Permalink.
လက်တစ်ဖက်ကို မြဲနေအောင်ကိုင်ထား (မောင်ပြည့်မင်း)
(တစ်ယောက်ချင်း – မောင်ပြည့်မင်း၊ အောင်ပြည့်စုံ။ နှစ်ကာလများ – စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၀၈။)
Categories: Cover Arts, Kabyarz, Post Modern | Tags: တစ်ယောက်ချင်း, မောင်ပြည့်မင်း, Kabyarz, lanolay, Maung Pyiyt Min, post modern | Permalink.
အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကို သွားကြိုရန်၊ အချိန်ရရင် နွားရိုင်းသတ်ရန် (ဇေယျာလင်း)
Categories: Cover Arts, Kabyarz, L=A=N=G=U=A=G=E | Tags: ကီလီမန်ဂျာရိုး, ဇေယျာလင်း, Kabyarz, L=A=N=G=U=A=G=E, lanolay, LP, post modern, Zeyar Lynn | Permalink.
Categories: Cover Arts, Kabyarz, L=A=N=G=U=A=G=E | Tags: ကီလီမန်ဂျားရိုး, ဇေယျာလင်း, Kabyarz, L=A=N=G=U=A=G=E, lanolay, LP, post modern, Zeyar Lynn | Permalink.
Categories: Articles, Cover Arts, L=A=N=G=U=A=G=E | Tags: ဂျွန်အက်ရ်ှဘရီ, ဂျွန်အက်ရ်ှဘရီနိဒါန်း, ဇေယျာလင်း, John Ashbery, L=A=N=G=U=A=G=E, post modern, Zeyar Lynn | Permalink.